रातो र चन्द्र सूर्य भन्दै यसरी नाचे हिमानी, ज्ञानेन्द्र, प्रेरणा मध्यरातमा ठमेलको नाइट क्लव LOD Lounge मा - Sajha Mobile
रातो र चन्द्र सूर्य भन्दै यसरी नाचे हिमानी, ज्ञानेन्द्र, प्रेरणा मध्यरातमा ठमेलको नाइट क्लव LOD Lounge मा
Posts 8 · Viewed 2259 · Go to Last Post
पुर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह काठमाडौँ ठमेलको रहेको नाइट क्लबमा मध्यरातमा पुगेर नाचेका छन । उनको साथमा बुहारि हिमानि र छोरि प्रेरणा पनि थिए । गएको शनिबार राति ठमेलमा रहेको एलओडी (लर्ड अफ ड्रिङ्क्स) लाउन्जमा
पूर्वराजा शाह, हिमानी र प्रेरणासहितको टोली राति साढे ११ बजेतिर लाउन्जमा पुगेको थियो । उनीहरु झण्डै राति एक बजे फर्किएका थिए । पूर्व जानकारी बिना नै अचानक आएको र केहीबेर नाचेर फर्केका थिए उनिहरुले रातो र चन्द्र सूर्य बोलको गीतमा नाचेका हुन् ।
हिरोइन पुजा शर्मा भन्दा कम छैनन तिनजना टिनेज छोरा छोरिकि आमा हिमानि
पुर्व युवराज पारस सोनिका रोकाय संग घुम्दै गर्दा उनकि पत्नि हिमानि अभिनेत्रि पुजा शर्मा संग देखिएकि छिन। नेपालि फिल्मकि चर्चित अभिनेत्रि संग खिचेको तस्विरमा हुर्किसकेका तिन छोरा छोरिकि आमा भए पनि हिमानि बढि सुन्दर र आकर्षक देखिएकि छिन।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र हारेर पनि जित्ने बाजीगरजस्ता : रिमा विश्वकर्मा
And Gyanendra's biography
शाहलाई भेटेकी रिमाले पूर्वराजा आफूले सोचेभन्दा बिल्कुल फरक पाएको नेपालखबरसँग बताइन्।
* यो अति नै भाइरल भयो तेसैले थप भिडियो -- पारस नाचेको पुरानो भिडियो सहित --
पुर्व राजपरिवार र नाइट क्लबको किस्सा - पारसले सोनिका भेटेको देखि मनोरन्जन क्षेत्रमा लगानि (भिडियो लाष्टाँ)
हालै हिमानि अनि ज्ञानेन्द्रले ठमेलको नाइट क्लबमा नाचेको बारेमा खुबै चर्चा भयो भिडियो भाइरल पनि भयो। तर, पुर्व राजपरिवारको नाइटक्लब संगको सम्बन्ध नयाँ भने होइन । यस अघि पारसले त्यसरि नै नाचेको भिडियो दुइ बर्ष अघि मेरा एक दर्शक प्रतिक गिरिले पठाउनु भएको थियो ।
अनि हालै पुर्व युवराज पारस सोनिका संगको भेट पनि पुर्वराज परिवार बेलाबेलामा नाइटक्लबमा जाने गरेको बिषयले नै शुरु भएको भनेर सोनिका रोकायाले बताएकि छिन । कान्तिपुरको साप्ताहिक संग कुरा गर्दै सोनिकाले भनेकि छिन -
पुर्वराजपरिवारको ब्यापारिक क्षेत्रमा पनि ठुलो लगानि रहेको छ । पुर्वराजा अधिराजकुमार हुंदा देखि नै बिभिन्न ब्यापारहरु सोल्टि होटल, सुर्य टोबाको, सिप्रदि ट्रेडिंग आदिमा लगानि रहेको थियो। तेसैले, नाइटक्लव मा उनको ब्यापारिक स्वार्थ पनि हुन सक्छ, उनको लगानि पनि हुन सक्छ। यसबारेमा थप जानकारि हुनेहरुले जानकारि दिनुभएमा म भबिष्यमा त्यस बारेमा चर्चा गर्ने छु । अहिले चाँहि सन २००१ मा मुल्यांकन मासिकमा प्रकाशित जानकारि अनुसार .... रिपोर्ट भिडियोमा हेर्नुस :
आनन्देको उमेर कति हो ? सोर सुन्दा चै बुडो लग्छ हर्कत चै केटा केटि पारा छ अजै, आनन्दे को video canadanepal तिर नि आउन लागेको रैछ, अनुप बराल लै नि चिनेको रैछ, भैरब अर्याल को बारे चै पुरै misleading information हालेको रैछ, कसैले चिन्दैनन् जे लेखे नि हुन्छ भनेको होला, सबै मोटा दिमाग को हुन्नन्,
लु अब "रुप चन्द्र बिस्ट" र थाहा आन्दोलन को video बनाउनु तान तुन गरेर अनि म मेरो आपराध बाट मुक्ति दिम्ला. अनि के हो जिब्रो बाक्लो छ कि के हो? "द्रसक" हैन "दर्सक" हो
म केटकेटि बन्ने, केट्केटि पारा ल्याउने भरपुर प्रयास गरिरहेको हुन्छु। कहिलेकाँहि आँफ्नै केटाकेटि पनि कन्फ्युज्ड हुन्छन अरुको त के कुरो भो र ।
मिसलिडिंग इन्फर्मेसन कुनै छन भने -- मेरा दर्शकहरु अति नै चलाख छन - गल्ति तुरुन्तै पत्ता लगाउँछन -- छिन छिनमा "सरि" भनिरहन बाध्य पार्छन !!
हिजो, आफ्तद आलमले "बारात " भनेको रहेछ मैले "भारत" सुनें -- आकास पातालको फरक भएछ -- तुरुन्तै प्रतिक्रिया आयो, "सरि" भन्नु पर्यो।
रुप चन्द्र बिष्टको बारेमा चर्चा गर्न मन लागेको हो, तर फुर्सद नभएर हो। कुनै दिन पक्कै बन्छ।
अब आनन्देले फुर्सद नपाएर नया video नाबनको भनौ भने दिन मा एक चोटी , पारस , हिमानी-सोनीको को video update गरेको गरै छ, तम्ले बनाको video कम्तिमा नि २ घण्टा खर्चेर बनका हौ, येसोरी दिन मा २ घण्टा वाहियात मान्छे को video बनार खर्चनु भन्दा "रुपचन्द्र" जस्ता मान्छे को बारे अलि अनुसन्धान गर, video बनाऊ, तम्रा कुनै video इतिहासको काल खण्डमा "दस्ताबेज " बन्न सक्छ, त्यो गजेडी पारस को रिपोर्ट त जो कोइ ले नि बनौन सक्छ, ताल पर्यो भने " गुलान" ले बनार हाल्न सक्छ
सहि कुरा हो ..
रुपचन्द जस्ताको बारेमा अनुसन्धान गर्न अलि समय लाग्दो रहेछ।
अब एक महिना मिस नेपालको पालो .. त्यसपछि पक्का .. ;)
Visitor from US is reading Mysansar kiss my A$$
Visitor is reading Nepal threatens to sue Kuwaiti companies
Visitor is reading Potluck at work
· Posts2· Viewed 166
· Posts 23 · Viewed 3087 · Likes 17
· Posts 19 · Viewed 2675 · Likes 2